Àmà: How m zọpụta | Apg29
Àmà: How m zọpụta
Otu ụbọchị, m chọpụtara na Jehova na-n'ezie bilitere na-eto eto nke Calvary.
Chineke matara ihe Ọ ga-akpọrọ m. O kwere ka m na-agụ ma na-aghọta erughị eru nke sayensị. Otu ụbọchị, m chọpụtara na Jehova na-n'ezie bilitere na-eto eto nke Calvary.
Nne nne m nyere m nwata okwukwe, ma ọ dịghị mgbe anyị na-aga chọọchị. Nkwenye bụ ihe ịtụnanya, ma m adịghị mma. M na-agụ ụfọdụ nkà mmụta okpukpe, ma virrade.
The eziokwu penetrated m nzuzu, e mekwara m baptizim. Ndị Kraịst nọ n'obodo ahụ bụ oké enyemaka. Nalen na obere bụ a na-egbuke egbuke ntụpọ.
O dugara a kewara ụlọ, ọ na-apụghị-mere mgbe ndị ụtarị akwara si ekpe, kamakwa ọtụtụ ndị ikwu na a zọpụtara. Mwute na ọṅụ. The revival abịa na mwute na ọṅụ, dị ka a Pentikọstal pastọ sịrị ka o dina n'elu ya deathbed.
Chineke adịghị ewere anyị na otu ụzọ, n'ihi na anyị nwere dị iche iche mkpa. Chris bụrụ mara mma ochie songs na-ekwu na obi ya. Ụfọdụ ndị ụkọchukwu na-ekwu okwu Chineke ezi Okwu. Ụfọdụ pagers amụ Bible intensively. Ụfọdụ, dị ka m, mkpa dabara n'ime a ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị-ekwu okwu.
Jehova malite na ala mgbe ọ na-arụ ọrụ. My na ndị ọzọ 'bụ ụmụaka bụ jogburu onwe ya na n'iti na nhụsianya. A baara m uru. Jehova nụrụ nwata eti ebe Ismail e ẹsịn n'okpuru a ohia.
Ọ bụghị ihe niile bụ ụmụ nke ọtụtụ ọgbọ nke Kraịst, ma e nwere ndị Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi na ndị ezinụlọ m na 1800s. Seven Baptist ndi ozuzu aturu gara United States na onye nwụrụ dị ka onye ozi ala ọzọ na Congo.
Wee were ọhụrụ oge n'elu. Mgbe ahụ na-etinye aka Jehova na anyị ga-abịa nri.
Nke a bụ a na-agba akaebe na-agụ email. My echiche bụ na-ede akwụkwọ nke.